दोलखाको चिलंखामा बन्ने अस्पतालको शिलान्यास, जर्मन नागरिकहरुको सहयोग मंगलबार, कात्तिक १६, २०७८
कालिञ्चोक गाउंपालिकाले सुरु गर्यो नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य विमा बिहीबार, भदौ १७, २०७८
नेपालमा हालसम्म ९७ लाख ८२ हजार डोज खोप भित्रियो शुक्रबार, साउन १५, २०७८
चीन सरकारले जिरी नगरपालिकालाई उपलव्ध गरायो ठुलो मात्रामा स्वास्थ्य सामाग्री शुक्रबार, साउन १५, २०७८
मन्त्री बस्नेतद्धारा एक करोड बरावरको स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण शनिबार, असार ५, २०७८
चरिकोट अस्पताललाई ‘पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताल′ नामाकरण गरिने शनिबार, जेठ २९, २०७८
सन्तानको योजनामा हुनुहुन्छ ? यो उमेरमा गर्भधारण गर्दा राम्रो ! धेरैजसो महिलालाई आफ्नो प्रजनन क्षमता सम्बन्धी अधिक जानकारी हुँदैन । यस कुरा त्यसबेला जरुरी हुन्छ, जब कुनै दम्पती सन्तानको योजना बनाउँन थाल्छन् । सामान्य धारणा के छ भने प्रजनन क्षमताको कुरामा महिला मात्र जिम्मेवार हुन्छन् । यद्यपि सत्य के भने, प्रजनन क्षमताको समस्या महिला र पुरुष दुबैमा समान हुन्छ । तर, यसमा महिलाको उमेर पनि केही मात्रामा भूमिका खेल्ने बताइन्छ । बुधबार, जेठ १९, २०७८
यस्तो जीवनशैली अपनाए कोरोना प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ, (हेल्थ टिप्स) काठमाडौं - नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिरहेको छ । धेरैजसो होम आइसोलेशनमा छन् । बिभिन्न खोपहरु प्रयोगमा आएपनि संक्रमित बिरामीका लागि औषधिको विकास भइसकेको छैन । खोपको प्रभावकारीतामा प्रश्न त छँदैछ, सबैको पहुँचमा पनि छैन । आइसोलेशनमा बस्नेहरु कोठामा सीमित हुँदा कसरी कोरोना मुक्त हुने भन्ने चिन्ताले धेरैजसोलाई सताइरहेको हुन्छ । बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
खराव यौन जीवनले सम्बन्धमा यसरी पार्नसक्छ असर जसरी राम्रो यौन जीवनले तपाईंको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, त्यस्तै खराब यौन सम्बन्धले यसमा नकारात्मक प्रभाव समेत पार्ने गर्छ । नराम्रो यौन सम्बन्धको मतलब यो होइन कि तपाई्ंहरू दुवै यौन सम्बन्धबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न । नराम्रो यौन सम्बन्धको मतलब दुई पार्टनरबीच लामो समयदेखि यौन सम्पर्क नराख्नु पनि यसको कारण हुन सक्छ । शनिबार, चैत २८, २०७७
यस्ता छन्, चिसो मौसममा कोरोना संक्रमणबाट बच्ने ८ उपाय ! काठमाडौं - चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ । चिसो मौसममा बढी सक्रिय हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको कोरोना भाइरसले आम नेपालीको जनजीवन यतिबेला प्रभावित बनाएको छ । स्वतन्त्र भएर कतै पनि हिँड्न नसकेको अवस्था छ । शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७
थप २ हजार १२० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि काठमाडौँ — नेपालमा थप २ हजार १२० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८४ हजार ५७० संक्रमितको संख्या पुगेको छ । शनिबार, असोज १७, २०७७
जेष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा चरिकोटमा ३७ जनाले गरे रक्तदान चरिकोट - अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवसको अबसरमा दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा ३७ जनाले रक्तदान गरेका छन् । सामाजिक अभियानमा सक्रिय योगदान राष्ट्रका लागि फाउन्डेसन, नेपालले आयोजना गरेको खुल्ला रक्तदान कार्यक्रममा ३७ जनाले रक्तदान गरेका हुन् । बिहीबार, असोज १५, २०७७
दाम्पत्य जीवनको सुख : यसरी गर्न सकिन्छ, यौनमा चरमोत्कर्षको अनुभव ! यौन सम्बन्धका क्रममा हुने चरम सुखको प्राप्तिलाई नै अर्गेज्म भन्ने गरिन्छ । जसको अनुभव यौन गतिविधिको दौरान हुने गर्छ । यसलाई कामोन्माद र चरमोत्कर्षको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । यसको अनुभव पुरुष र महिला दुवैलाई हुने गर्छ । बिहीबार, असोज ८, २०७७
अध्ययनको निष्कर्ष : ध्यानले महिलाहरुको यौन जीवनलाई आनन्ददायक बनाउँछ महिलाहरूले यौन आनन्दको लागि कस्तो उपाय अपनाउन सक्लान् ? यौन जीवनमा हुने कमजोरीका कारण धेरैको घरपरिवारमा समस्या निम्तिने गरेको पाइन्छ । एउटा सहज खालको जीवनशैलीगत सुधारले हाम्रो यौन जीवनलाई फाइदा पु¥याउँछ भन्ने विषयमा भने धेरै बेखर हुन सक्छन् । बिहीबार, असोज ८, २०७७
कसरी बन्छ, पुरुषको वीर्य ? यस्तो छ, वीर्य उत्पादनको वृतान्त पुरुषमा उत्तेजना वा स्खलनको दौरान मूत्रमार्गबाट निस्कने तरल पदार्थलाई वीर्य भन्ने गरिन्छ । यो प्रोटेस्ट ग्रन्थी र अन्य पुरुष प्रजनन् अंगहरूद्वारा शुक्राणु वा अरू तरल पदार्थ ग्रहण गरेर बन्ने गर्छ । आम रुपमा वीर्य गाढा एवं सेतो रंगको हुने गर्छ । तर कैयौं स्थितिमा यसको रंग र गुणवत्तामा भिन्नता पनि आउन सक्छ । पातलो वीर्यले कम शुक्राणु भएको संकेत गर्ने गर्छ । जसबाट हाम्रो प्रजनन् क्षमता प्रभावित हुने गर्छ । बिहीबार, असोज ८, २०७७
स्वास्थ्यमन्त्रीको परिवारमा देखियो कोरोना, मन्त्री ढकाल क्वारेन्टिनमा काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको परिवारमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । मन्त्री ढकालको परिवारका एक सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । परिवारका सदस्यमा कोरोना देखिएपछि मन्त्री ढकाल क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । आइतबार, भदौ २१, २०७७
मेलुङ गाउँपालिकामा विशेषज्ञसहितको टोली खटाएर रेबिज नियन्त्रणको प्रयास चरिकोट – दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले विशेषज्ञ सहितको टोली परिचालन गरी रेबिज नियन्त्रण अभियान थालेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्र्तगत महामारी रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुबाट झिकाईएका विशेषज्ञसहितको टोलीले रेबिज नियन्त्रण कार्य सुरु गरेको हो । उक्त टोलीले शुक्रवार एकैदिन ५१ जनालाई एन्टी रेविज भ्याक्सिन लगाएको छ । शनिबार, भदौ १३, २०७७
कोरोना जितेका युवक भन्छन् : कोरोना जितिन्छ तर समाजको गलत व्यबहार बदल्नुपर्यो, सिंगटी – कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर–३ का २६ वर्षिय मोतिराम (नाम परिबर्तन) ले दुई साता धुलिखेल अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेर कोरोना जिते । साउन २९ गते आइसोलेसनमा भर्ना भएका उनी भदौ ९ गते डिस्चार्ज भएका हुन् । बिहीबार, भदौ ११, २०७७